”Lakkoofsa namoota irreecha deemanii daangessuun safuudha” Abbaa Gadaa Goobana Hoola – Kichuu
HomeAfaan OromooVideos”Lakkoofsa namoota irreecha deemanii daangessuun safuudha” Abbaa Gadaa Goobana Hoola
Irreecha Oromoo: ‘Lakkofsa irreeffattootaa daangessuun Oromoo malkaarraa ugguruun safuudha’
Dhimma ayyaana Irreechaa Sanabataafi Dilbata dhufu Hora Finfinneefi Hora Bishooftuutti kabajamu ilaalchisuun BBC waliin turtii kan taasisan Abbaan Gadaa Tuulamaafi Barrreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa, Irreechi baranaa akka dur itti Irreefatamuun adda jedhu.
(bbcafaanoromoo)—“Irreecha baranaa kana akkuma bara darbee fa’atti ummanni miliyoonaan dimbiliqnee kabajna yoo jenne amma biyya Itoophiyaa kana keessa rakkoowwan ciccimootu jiru. Dhukkubni baraa kuniifi rakkoon nageenyaatis jiraachuu mala,” jedhan.
Gamtaan Abbootii Gadaa dhimmoota kana ilaaluun dhimma nageenyaa qaamni nageenyaa akka raawwachiisu, kan fayyaas warri fayyaa akka hordofu murteesine jedhan.
Namni Irreechaaf gara malkaa dhufu ofeegannoo yoo gochuu baate dhukkuba qorichisaa hin argamne kana carraan fuudhanii gara maatiifi hawaasaatti deebi’uu bal’aa akka ta’es akeekachisan.
“Ummanni keenya ayyaana kanaaf waan abbootiin Gadaa jedhan dhagahanii, waan qaamni mootummaas ofeegannoof jedhu dhagahanii Irreefannaa kanarratti argamuu qabu.
”Rakkoo gurguddoo lamaan nu eeggatan kana toftaadhaan jala darbuu qabna,” jedhan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa.
Baay’ina namoota Ayyaana Irreechaa irratti hirmaatanii gama ilaaleenis Gamtaan Abbootii Gadaa daangaa lakkoofsa Irreefattootaa kaa’ee Oromoo malkaarraa ugguruu hin danda’u jedhan.
“Amma Oromoo malkaa irraa ugguruun hin danda’amu. Abbaan Gadaa namni hammanaa haa irreefatu, abalu yaa dhufee irreeffatu abalummoo yaa hafu jechuun safuudha. Sababnimmoo namoonni kun galata galfachuu deemu waan ta’eef,” jedhan.
Haala nageenyaafi ofeegannoo dhibee baraa kana waliin akkaataa deemuu danda’uun dhimma kana kan murteessu warra nageenyaafi warra fayyaatiif dabarsine jedhan Abbaan Gadaa.
Dhimmi namoota irreeffannaa deemaniif qoodinsa baajiifi kaanis Abbootii Gadaa akka hin ilaallanneefi qaamni mootummaa dhimmicha akka waarratus himan.
Biyyi nagaa ta’ee osoo dhukkubni baraa kun dhufuu baatee Irreechi baranaa kan bara darbee caalaa akka bareedu shakkii hin qabnu kan jedhan Goobana Hoolaa, amma garuu haala yeroo xiyyeefannaa keessa galchuun uummanni ofeegannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhaaman.
“Ummanni Oromoo Irreechaaf akka dursa kennu nan beeka. Keessumaa kan Finfinnee kun kan xiiqiiti, garuu ammoo waan barriifi Gadaan nutti fide kana obsaan dabarsuu barbaachisadha.
”Yoo fayyaan jiraate bara dhufus ni irreefanna waan ta’eef. Dursa lubbuufi nageenya keenyaaf kennuu qabna,” jedhan.Irreechi baranaa yeroo raafama siyaasaafi dhiphina hedduu keessa jirrutti kan kabajamu waan ta’eef, akka Abbaa Gadaatti yaaddoo cimaa keessan jira jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.
“Haalli qabatamaan amma sabaafi sablammiin biyya kanaa itti jiru akka duraa sana miti. Walitti garaan badee jira. Oromiyaa keessattis haalli nageenyaa kun mana nama baayyee tuttuqee jira.
”Namni namni jalaa hin hidhamin, hin madaahin hin jiru. Uummanni Oromoo dallanee jira. Haala akkanaa keessatti Irreefannaan hedduu na yaaddessa,” jedhan.
Qeerroofi Qarreeen Ayyaana Irreechaa kana kabajuuf gara malkaa dhufus ajaja qaamoleen nageenyaafi Abbootiin Gadaa dabarsan fudhachuun qaamolee nageenyaa waliin waldhabdee hin malle keessa galuu akka hin qabnes dhaaman.
Agarsisa police Guyyaa arratifi Motummaan Dandii Finfinne cufe jirachu kuno itii dhiyadha
“Namni nagaa dhabe nagaa barbaacha gara Bosonaa nii deema!” Proof. Mararaa Guddinaa